Iinwele Zamadoda Ngoku: Ezona Zinwele Zibalaseleyo Kunye Neenwele Zamadoda. Imbono Ye-Tattoos. Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi., Eyekhala 2022
Amacala okucheba iinwele zamadoda
Izinwele zokucheba kwamacala amadoda ziye zahamba kule minyaka idlulileyo, nabafana bexabisa isitayile esifutshane kodwa esihambelanayo. Kuba amacala achetyiweyo angena kumacala amafutshane athandwayo, umphezulu omde…
I-Big 6 yakho ibhekiselele kwimpembelelo yeLanga, iNyanga, i-Ascendant, iMercury, iVenus, kunye nokubekwa kweMars kwitshathi yakho yokuzalwa.
Umqondiso wakho wokuNyuka, okwaziwa ngokuba ngumqondiso wakho oNyusayo, ubonisa indlela abanye abantu abakubona ngayo nabakubona ngayo. Ikwachaphazela izindlu zakho, irula yetshathi, kunye nokunye...
I-Dreadlocks yenye yezona zithandwa kakhulu kunye neenwele ezilungileyo kumadoda amnyama. Okwangoku nokupholile, uloyiko lunokunxitywa lufutshane okanye lude, nge-taper fade okanye undercut on…
IPhoenix kudala imi njengophawu lokuzalwa kwakhona, kwaye kumadoda amaninzi, imele isenzo sokuvuka eluthuthwini ukuqala ngokutsha. Umvambo wePhoenix…
Yintoni umqondiso wakho weLanga? (+Imihla yoMqondiso weZodiac)
Isibali sokubala sasimahla seLanga: yenza ikopi yasimahla yetshathi yakho yokuzalwa kwaye ufumane intsingiselo yokwenyani yophawu lwakho lwelanga ekuvumiseni ngeenkwenkwezi.
Zininzi iinwele ezipholileyo zamadoda aneenwele ezi-wavy. Ngapha koko, iinwele ezijijayo zingumthamo wesitayile kunye nemvakalo entle eyakhelwe ngaphakathi kuwo onke amanqatha kunye nezitayile zabo ...
Ukucheba iinwele zamakhwenkwe aneminyaka emi-3
indlela yokufumanisa uphawu olunyukayo
iinwele ezithambileyo zangaphantsi
ukunyamalala ixesha elide phezulu